my kitchen my life: food revolution တဲ့လား။
food revolution တဲ့လား။
သူက ဆက်ပြောထားပါသေးတယ်။ အရွယ်ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန် ၆၈ % ဟာ overweight တဲ့။
မူရင်း link က ဒီမှာ ပါ။ အဲ့ဒီမှာ PDF နဲ့ ရေးထာတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒေါင်းပြီး ဖတ်ပေါ့။း) အောက်မှာ အမြည်းသဘော လေး ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
The National Dairy Council (NDC) saysaserving of flavoured milk has about4teaspoons of added sugar. Ifakid drinks two servings, that’s 8 extra teaspoons of sugar per day they don’t need.
Posted by leo mark at 2:36 AM